Ohatrinona no nataon'i Dwayne 'The Rock' Johnson isaky ny sarimihetsika? - Wwe
Ohatrinona no nataon'i Dwayne Johnson isaky ny sarimihetsika?
Dwayne Johnson, aka The Rock, no anarana malaza indrindra any Hollywood ankehitriny. Izy dia iray amin'ireo atleta vitsivitsy izay nanomboka ny asany tamin'ny tolona matihanina (WWE) talohan'ny nifindrany tany Hollywood, nanokatra ny lalana ho an'ireo kintana WWE hafa toa an'i John Cena sy Dave Bautista.
Ny tantaran'ny tolona Samoa dia nanamafy ny lovany tamin'ny indostrian'ny mpiady. Taorian'izay dia nitombo ny halehany teo amin'ny sehatry ny fihetsika. Ny fotoana mamaritra ny asany dia tonga tamin'ny 2017 rehefa Dwayne Johnson nahazo kintan'ny anarany tao amin'ny Legend of Hollywood malaza an'ny Legendary Hollywood . Efa ampahany amin'ny franchise mahomby toa an'i Fast and the Furious ary Jumanji, toa ny lanitra no fetra ho azy.
Ohatrinona ny karaman'i Dwayne Johnson?
Tsy mahagaga raha i Dwayne Johnson no mpilalao be karama indrindra any Hollywood. Na dia mbola tsy fantatry ny besinimaro aza ireo tarehimarika ho an'ny 2021, dia nalahatr'i Dwayne ho an'ny lisitr'ireo mpilalao Hollywood be karama indrindra Forbes miaraka amin'ny vola mitentina $ 87,5 tapitrisa eo anelanelan'ny volana Jona 2019 sy ny Jona 2020.
famantarana tsy tia anao intsony izy
Fantatra amin'ny anarana hoe The Rock, Dwayne Johnson no mpilalao sarimihetsika be karama indrindra eran'izao tontolo izao noho ny karama lehibe amin'ny horonantsary ho avy 'Black Adam' sy 'Red Notice' https://t.co/4Vhoc3GmKH # Celeb100 pic.twitter.com/B9GOcaRPqZ
- Forbes (@Forbes) 4 Jona 2020
Mandritra a TATITRA nanomboka tamin'ny taona 2018 dia nilaza fa nahazo $ 20 Million isaky ny sarimihetsika i Johnson, nitombo ihany ny fidiram-bolan'ny mpisehatra Hobbs sy Shaw nanomboka tamin'izay, niaraka taminy ny nahazoany $ 23,5 tapitrisa ho an'ny Red Notice, sarimihetsika Netflix ho avy.
ny fomba hanehoana fitiavana ny sakaizanao
Voamarika amin'ny fomba ofisialy ianao @Netflix Sarimihetsika lehibe indrindra hatramin'izay #REDNOTICE premieres ao amin'ny efitranonao manerantany amin'ny NOV 12
Mombamomba ny FBI.
Mpangalatra zavakanto tena tadiavina erak'izao tontolo izao.
Ary ny conman lehibe indrindra eto an-tany tsy mbola nahita… @GalGadot @VancityReynolds #REDNOTICE 🥃 pic.twitter.com/O0mqkYCqGy
- Dwayne Johnson (@TheRock) 8 Jolay 2021
Manontany tena matetika ny mpankafy fa maninona ny The Rock no tsy mody any WWE, omena ny fanantenana ny lalao nofy eo aminy sy ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy Roman Reigns. Ny antony mety ho antony dia ny vola, nomena an'i Brock Lesnar, ny superstar WWE be karama indrindra tamin'ny taona 2020 , dia nomena ny antsasaky ny azon'ny The Rock ho an'ny sarimihetsika tokana.
Nefa Vince McMahon dia fantatra fa hamoaka ny fijanonana rehetra ho an'ny WrestleMania mahatalanjona. Ny fotoana ihany no hiteny raha mahita an'i Dwayne Johnson miverina eo amin'ny faribolana efajoro isika.
Vakio momba: Tranon'i Dwayne Johnson
Lehilahy namela ahy ho an'ny vehivavy hafa haharitra ve
tsy manana fanantenana na nofinofy aho
mijery aza miaina maimaim-poana amin'ny Internet
zavatra tokony hatao raha mankaleo ao an-trano ianao
ahoana no ahafantaranao raha misy mampiasa anao amin'ny fiarahana